Entertainment news. Nepali Movies. Nepali Celebrities. Gossips. Lifestyle. Singers. - NepalUpclose.com
आउँदो ४२ महिनासम्म बलिउड हिरो सञ्जय दत्तलाई कैदी नम्बर १६६५६ का रुपमा चिनिनेछ। पुनेको यारवादा जेलमा उनलाई दिइएको कैदी नम्बर यही हो।
५३ वर्षका हिरोलाई मुम्बईबाट पुनेको जेल लगिएको हो। उनलाई जेलमा वेग्लै कोठामा राखिएको छ। उनलाई अण्डा सेलमा राख्नेल हल्ला भएपनि राखिएको छैन। अण्डा आकारको कैदी राख्ने घरलाई अण्डा सेल भनिएको हो। सन् १९९३ मा मुम्बई हमलाम ...
कान्समा पापराजी सामु सर्लिन चोपडा
बलिउड हिरोइन सर्लिन चोपडा कान्स अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिवलमा के पुगेकी थिइन् पापाराजीको आँखा उनमा लागिहाल्यो। सेतो र सुनौलो रङको भारतीय लेहङ्गा चोलीमा सजिएकी उनी आउँदो थ्री डी फिल्म कामसुत्रको टिमसहित थिइन्। ...
सोनम सचेत today.
हिन्दी फिल्म ‘राझना’ का निर्माता आनन्द रायले अभिनेत्री सोनम कपुर सचेत नायिका भएको टिप्पणी गरेका छन् । निर्माता रायका अनुसार यस फिल्ममा सोनमले गम्भीर चरित्र निर्वाह गरेकी छन्, सोनमले मैले सोचेभन्दा निकै राम्रो अभिनय गरिन्,’ उनले भने ।
सन्जयलिला भन्साली निर्देशित फिल्म ‘सावरिया’बाट बलिउड फिल्ममा प्रवेश गरेकी सोनम असफल नायिकाको पंक्ति ...
जियाको पहिलो फिल्म रिलिज हुने
राजधानी समाचारदाता काठमाडौं, ८ जेठ
पछिल्लो समय विवादास्पद छवि बनाएकी जिया केसी अभिनित पहिलो फिल्म ‘हो यही हो माया’ प्रदर्शन हुने भएको छ । यस चलचित्रमा जिया नायक राज तिमल्सेनाको जोडीका रूपमा प्रस्तुत भएकी छिन् । त्यसो त यस फिल्ममा उनको अभिनय पनि सहज छ । ‘हो यस फिल्ममा मैले सामान्य अभिनय गरेकी छु,’ जियाले भनिन् । एटीएम, बर्बादलगायतका फिल्ममा अंग प्र ...
उदयको निर्माणमा सुब्रतको निर्देशन
काठमाडौं : रंग पत्रकार चलचित्र निर्देशनमा उत्रने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । पत्रकार डब्बु क्षत्रीले चलचित्र राहदानीको निर्देशन थालेको केही समय नबित्दै अर्का पत्रकार सुव्रत आचार्य पनि चलचित्र निर्देशनमा उत्रने भएका छन् ।
उनी ‘अधकट्टी’ नामक चलचित्रमार्फत निर्देशनमा होमिन लागेका हुन् । चलचित्रलाई निर्माता तथा वितरक प्रदीप उदयले निर्माण गर्ने भएका छन् ...
मिस थकाली प्रशिक्षणमा today.
राजधानी समाचारदाता पोखरा, ८ जेठ
सुन्दरी प्रतियोगिताको दौडमा पोखरामा प्रथम मिस थकाली प्रतियोगिता हुँदै छ । ट्रेनर नेपालको आयोजना तथा थाक–५ गाँउ उद्धार समिति मुस्ताङको मुख्य प्रायोजनमा र विभिन्न थकाली समाजहरूको सहकार्यमा यही १८ जेठमा पोखरा सभागृहमा पहिलो मिस थकाली प्रतियोगिता हुन लागेको हो ।
भैरहवा, जोमसोम, मार्फा, बेनी, पोखरा, काठमाडौं, भीमाद तथा दे ...
छापामार हिरोइनको डायरी
माओवादी जनयुद्ध चरम उत्कर्षमा थियो। 'एक घर : एक छापामार'को माओवादी उर्दीले सुदूरपश्चिमको धनगढी बजार पनि त्रसित थियो। छोरीलाई काठमाडौं पढ्न पठाएर अभिनेत्री ऋचा शर्माका बाबु ढुक्क थिए। ऋचा भने गृहनगर खुब मिस गर्थिन्, छुट्टी भयो कि घर फर्कन हतार। नजिकैको पुलिस चौकीले उनको परिवारलाई सुरक्षित र त्रसित दुवै तुल्याएको थियो। सहरका व्यापारीको अपहरण र हत्याक ...
सहरको जीवन्त डेरा जिन्दगी
राजधानीलाई मोफसलले सधैं चमकधमक र सम्पन्न सहरको रूपमा मात्रै देख्छ, हेर्छ । तर यहींभित्र आइसकेपछि राजधानीले गरिबी र अभावको पाटोलाई लुकाउन सक्दैन । झन् शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको फिल्म 'अन्तराल' ले त राजधानी र यसलाई भोगिरहेकाको समस्या र दुःखलाई देशभर छताछुल्ल पारिदिएको छ । दीपा बस्नेत निर्देशित फिल्मले जीवनको धेरै नजिक पुगेर यसका पत्रपत्र केलाउने प ...
विजयलाई सम्मान सन्तोष र सन्दीप पुरस्कृत
चलचित्र पत्रकार संघको १५औं वार्षिकोत्सव मंगलबार राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । सोही अवसरमा संघले एक पत्रकारलाई चलचित्र पत्रकारिता सम्मान र दुई पत्रकारलाई चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरेको छ । दुई दशकअघि पत्रकारिता सुरु गरेका र चलचित्र निर्देशकसमेत रहेका विजयरत्न तुलाधरलाई २०६९ सालको चलचित्र पत्रकारिता सम्मान प ...
'वाच डग' का रूपमा लिइने पत्रकारले समाचारमा सत्य लेख्ने कि कसैलाई पुलकित पार्न लेख्ने ? पछिल्ला समय रंगपत्रकार र रंगमकर्मी वा कलाकारबीचको सम्बन्ध बिग्रन थालेको छ । समाचारबारे चित्त नबुझेकै कारण नाम चलेकै कलाकारबाट समेत हातपात वा ज्यान लिनेजस्ता निकृष्ट धम्की आउन थालेपछि एकै क्षेत्रमा क्रियाशील दुई फरक पेसाकर्मीबीच सम्बन्ध चिसिन थालेको हो ।
यसैलाई इं ...
निशा पुगिन् शिखरमा
काठमाडौं : अभिनेत्री निशा अधिकारी सगरमाथाको शिखरमा पुगेकी छन् । मंगलबार बिहान ८ बजे उनले सरमाथा शिखरमा पाइला टेकेकी हुन् । अर्जुन कार्की शिखरमा पुगेको भोलिपल्ट अधिकारी सगरमाथामा पुग्न सफल भइन् । नायिका अधिकारीसँगै ७० भन्दा बढी आरोहीले उनीसँगै शिखर चुमेको सम्पर्कअधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गत चैत २७ गते सगमाथा चढ्नका लागि काठमाडौंबाट ...
लाहुरेको भूमिकामा जम्दै घले
काठमाडौं : नेपाली चलचित्रमा लाहुरेको भूमिका रहने चलन आजको होइन । तर, लाहुरेको भूमिकामा देखिने व्यक्ति भने फरकफरक रहँदै आएका छन् । पछिल्लोसमय लाहुरेको भूमिकामा जम्दै गरेका कलाकार हुन् धन घले । राजेन्द्र खड्गीको चलचित्र ‘नोथिङ इम्पोसिबल’मा लाहुरेको भूमिकाबाट चलचित्र अभिनयमा प्रवेश गरेका घले कलाकारितामा विस्तारै छाउँदै छन् ।
पहिलो चलचित्र ‘नोथिङ इम्पो ...
चित्रकला कार्यशाला सम्पन्न yesterday.
नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान चित्रकला विभागको आयोजना र नेपाल कमर्सियल आर्टिस्ट संघ बुटवलको सहकार्यमा एकदिने जलरङ चित्रकला कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । बुटवलको पुरानो बजार बटौलीका विभिन्न दृश्यात्मक र पुरानो सांस्कृतिक महŒवका पुराना घर र वरिपरिका परिवेशलाई कागजमा रङ भरी सो कार्यक्रम समापन गरिएको थियो । बुटवल, पाल्पाका कलाकार डी. राम ...
भारतको एक विद्यालयले अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको जीवनी कोर्सबुकमा राखेको छ । भारतमा सञ्चालित ‘स्प्रिङ डेल स्कुल’ ले प्रियंकाको वारेमा एउटा पाठ राखेको छ ।
यो स्कुल सिबयसईबाट मान्यताप्राप्त संस्था हो भने भारतबाहेकका अन्य केही मुलुकमा यसको शाखा छ । पुस्तकमा प्रियंकालाई सैनिक पृष्ठभूमिकी युवती भनेर चर्चा गरिएको छ । प्रियंकाको विषयलाई को ...
उमाले साख जोगाउन सक्छ May 21.
माओवादी पृष्ठभूमिमा बनेका फिल्मले आमदर्शकलाई प्रभाव पार्न नसकेपछि कमरेड निर्देशकहरूले त्यस्ता विषयमा फिल्म बनाउनै छाडिदिए । तर, यही समयमा एक जना गैरकमरेडले फिल्म बनाए ‘उमा’ । जुन फिल्मप्रति आमदर्शकको चासो मज्जैले बढेको छ ।
कतिपय निर्देशकको भनाइअनुसार माओवादीको साख पनि यही फिल्मले राख्न सक्छ । समग्र नेपाली फिल्मप्रति दर्शकको चासो घट्द ...
फेसन डिजाइन अवार्ड हुने
काठमाडौ : विभिन्न क्षेत्रका अवार्ड भइरहेको वर्तमान समयमा अब फेसन डिजाइनर अवार्ड पनि हुने भएको छ । यसै क्षेत्रमा समर्पित युवाका स्वआर्जन तथा स्वकौशल प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यले इ–प्लानेट नेपालले यो अवार्ड आयोजना गर्न लागेको हो । क्रियटिभ अवार्ड अर्थात् प्लेटफर्म फर फेसन डिजाइनर नामकरण गरिएको यो प्रतियोगिता आगामी असोज १८ गते राजधानीमा एक भव्य कार्यक् ...
विद्याको फ्रान्स योजना
मुम्बई : अभिनेत्री विद्या बालन केही दिनदेखि फ्रान्समा छिन् । ६६औँ कान्स अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवमा भाग लिन उनी त्यहाँ पुगेकी हुन् । महोत्सवको बहानामा फ्रान्स पुगेकी भए पनि विद्याले त्यहाँ अर्का योजना बनाएकी छन् । उनको अर्काे योजना श्रीमान् सिद्धार्थ राय कपुरका साथमा फ्रान्सका विभिन्न भूभाग घुम्ने छ ।
‘विद्या अचेल कान्स महोत्वसमै व्यस्त छिन् । ...
धड्कनको रिमेक बन्ने May 21.
रिमेक र सिक्वेलका कारण बलिउडमा मौलिक फिल्मको अभाव सुरु भएको छ । पछिल्लो पटक सन् २००० मा बनेको चर्चित फिल्म ‘धड्कन’ को रिमेक बन्ने भएको छ । निर्देशक धर्मेश दर्शनले चाँडै फिल्म निर्माण गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् । तर, निर्देशक दर्शनले नयाँ फिल्मलाई पूरै रिमेकको रूपमा नहेर्न अग्रह गरे । ‘म आग्रह गर्छु यो फिल्मलाई धड्कनको सिक्वेलको मात्र ...
कार्यक्रममा निर्देशक दीपक श्रेष्ठले चलचित्रको बारेमा भन्दा पनि नायक राजेश हमालले यसको प्रचारमा साथ नदिएको गुनासो पोखे । राजेशले साथ नदिए पनि चलचित्र राम्रो भएको उनले द ...
काठमाडौ, जेष्ठ ६ - करिश्मा गत बुधबार बैंककमा अलपत्र परिन्, अलपत्र पर्ने अवस्था पनि उनी आफैंले सिर्जना गरेकी थिइन्। २४ घण्टापछि उनी नेपाल त फर्किइन् तर अलपत्र पर्ने कारण सुन्दा जो-कोही हाँस्न बाध्य हुन्छन्। रोशन हमाल निर्देशित चलचित्र रङको प्रदर्शनका लागि चलचित्र युनिटसहित उनी जापान पुगेकी थिइन्। जापानबाट नेपा ...
'मलाई मोटो केटो मनपर्छ'
काठमाडौ, जेष्ठ ६ - अभिनेत्री निता ढुंगानालाई कस्तो पुरुष मनपर्छ, कस्तो मन पर्दैन ? मन पर्छ
बोल्ने शैली : महिलाहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्दै मीठो बोल्ने पुरुष।
हँसिलो मुहार : पहिले अनुहारको भाव हेर्छु, हँसिलो मुहारले त्यसै पनि आकषिर्त गर्छ। केयरिङ : आफ्ना महिला मित्रको विशेष हेरचाह गर्ने स्वभावका ...
चम्कि“दै महिला लोकब्यान्ड May 20.
डब्बु क्षत्री÷राजधानी काठमाडौ, ५ जेठ
पेसाले औषधि व्यवसायी हुन्, ललितपुरकी शारदा डंगोल । उनी सबै प्रकारका मादल बजाउँछिन् । मादलका विभिन्न ताल सुनाएर संगीत प्रेमीलाई मोहित तुल्याउँछिन् । आफ्नो पेसाबाट बचेको समयलाई संगीतमा समर्पण गर्दागर्दै उनी महिला मादल वादकका रूपमा स्थापित भइसकेकी छन् । शारदाले आपूmजस्तै ललितपुरका पाँचजना युवतीलाई समेटेर ‘श्रीतारा ...
अश्लील दृश्यले दर्शक लोभ्याउँदै
काठमाडौं : पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रमा ‘सेक्स’ बिक्न थालेको छ । यसको ज्वलन्त उदारण हो ‘युज’ । गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको यस चलचित्रले एकै समय रिलिजमा आएका अन्यभन्दा राम्रो दर्शक पाइरहेको छ ।
प्रदर्शनको केही दिनदेखि यसले दर्शक तानेको निर्देशक बाबु बलामीले भनेका छन् । आइतबारको दोस्रो सो हेर्न विश्वज्योति हलमा दर्शकको भीड लागेको उनले दाबी गरे । उ ...
सम्मोहित समयमाथि अन्तरक्रिया
मोफसलमा बसेर साहित्य सिर्जना गर्ने कथाकार गंगा सुवेदीको कथा संग्रह ‘सम्मोहित समय’माथि स्रष्टाहरूले चर्चा परिचर्चा गरेका छन् । राजधानीमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सुवेदीको कथामाथि आफ्ना धारणा राखे ।
कथाकारितामा कलम चलाउने स्रष्टाहरूले उनको कथाले नेपाली साहित्यमा नवीन आयम थपिएको बताए । कथा संग्रह च ...
सुरु भयो राहदानी
आइतबार राजधानीमा शुभ मुहूर्तसँगै चलचित्र राहदानीको निर्माण सुरु भएको छ । मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारीसँगै मुलुकमा युवाहरू विदेश पलायन प्रसंगमा यो चलचित्र निर्माण हुन लगेको हो ।
६ जेठबाट मोफसलदेखि यो चलचित्रको छायांकन सुरु हुने भएको छ । महोत्तरीको बर्दिबास, काठमाडौं र मलेसियामा छायांकन हुने यो चलचित्रको प्रस्तुतकर्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकाल हुन् ...
काठमाडौ, जेष्ठ ५ - सधैं क्यामेराअघि सुटिङमा व्यस्त रहने नेपाली कलाकारहरू शनिबार फरक दृश्यमा देखिए । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको मैदानमा कलाकारहरू बुट र जर्सी लगाएर फुटबल खेल्न व्यस्त थिए । यस्तो अवसर जुराएका थिए, नेपाल विज्ञापन संघ -आन) र नेपाल चलचित्र कलाकार संघले । रोमाञ्चक खेलमा आनले चलचित्र कलाकार ...
सुकृति बनिन् लिटिल मिस एन्जल
राजधानी समाचारदाता काठमाडौं, ४ जेठ
‘लिटिल मिस एन्जल–२०१३’ को उपाधि सुकृति उप्रेतीले जितेकी छन् । शनिबार राजधानीको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजित अन्तिम प्रतिस्पर्धामा ५४ जनालाई पछि पर्दै उनी सो उपाधि विजेता बनेकी हुन् । उपाधिसँगै उप्रेतीले ताज, १५ हजार रुपैयाँ र विभिन्न उपहार पाइन् ।
निर्णायकले सोधेको ‘ठूलो मान्छे बन्ने कि असल मान्छे बन्ने’ भन्न ...
अब कमरेड रेखा
अभिनेत्री रेखा थापा कमरेड भएकी छन् । नेकपा एमाओवादीका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएकी थापा आधिकारिक रूपमा सो पार्टी प्रवेश गरेकी छन् । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आङ्खनो पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार बिहान एक कार्यक्रममा अभिनेत्री थापालाई अबिर लगाएर पार्टी प्रवेश गराए ।
थापाले सदस्यता पनि लिएकी छन् । यदि पार्टीले आप ...
सन् १९९३ को मुम्बई हमलाको बेलामा अवैध हतियार राखको आरोपमा अदालतको सजाय काट्न सुरु गरेका सञ्जय दत्त पहिलो दिनमै आत्तिएका छन् । उनलाई मुम्बईको कडा सुरक्षा भएको आर्थर रोड जेलमा राखिएको छ । दत्त यो जेलको अण्डा सेलमा छन् । जहाँ बिशेषत खुंखार अपराधीलाई राख्ने गरिन्छ ।
सञ्जयका वकिकले हिजै टाडा अदालतमा पुगेर उनी आतंकवादी नभएकाले यस्तो ठाउामा नराख्न अनुरो ...
१४ विधामा फिल्मी खबर अवार्ड May 19.
पछिल्लो समय फिल्म अवार्ड गर्ने क्रम बढेको छ । यसै क्रममा फिल्मी खबर डट कमले पनि ‘फिल्मी खबर अवार्ड–२०७०’ आयोजना गर्ने जनाएको छ । फिल्मी खबरका अध्यक्ष सुमन गैरेले सो अवार्डको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको शनिबार जानकारी गराए । २६ जेठमा राजधानीमा विशेष कार्यक्रममाझ अवार्ड प्रदान गरिने पनि गैरेले बताए । गैरेका अनुसार ०६९ मा प्रदर्शनमा आएका च ...
ब्रिटनीको चाहना : छोरी
लन्डन : पपस्टार ब्रिटनी स्पियर्स छोरी जन्माउन चाहन्छिन् । हालै मात्र उनले आफूमा छोरीकी आमा बन्ने चाहना रहेको सार्वजनिक गरेकी छन् ।
‘आई एम नट ए गर्ल’ जस्ता सर्वाधिक चर्चा कमाउन सफल एल्बम गीत/संगीतप्रेमीमाझ पस्कन सफल स्पियर्समा यो चाहना भर्खरै मात्र जागृत भएको हो । ३१ वर्षीया स्पियर्सका पूर्वश्रीमान् केविन फेडरलाइनतिरका दुई छोरा उनका साथमा छन् । जसको ...